မြေးက မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီး အဖွားကိုထောင်ချရန် ကြံစည်သည့်အမှုနိဂုံး ( စီရင်ချက်အမိန့် )
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာမြို့နယ်တရားရုံးတွင် မုဒိမ်းကျင့်ပါသည်ဟုခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းခံသည်ဆိုသောအမှုအား မြို့နယ်တရားသူကြီးမှ တရားလိုနှင့်စွပ်စွဲခံရသူများကို သေချာစွာ စစ်ဆေးကြားနာပြီးနောက် ယနေ့ ၁၈ . ၉ . ၂၀၁၉ နေ့တွင် စီရင်ချက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါသည် ..
စီရင်ချက်အမိန့်ချမှတ်ရာ စွပ်စွဲခံရသူများသည် ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းခံသည်ဆိုသည့်အကြောင်းခြင်းရာများ မပေါ်ပေါက်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရ၍ သံသယတရားခံများကို အမှုမှအပြီးသတ်လွှတ်ပေးလိုက်သည်ဟု အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည် ..
ထိုအမှုတွင် ခြိမ်းခြောက်သည့်အကြောင်းခြင်းရာဖြစ်သည့် မုဒိမ်းမှုသည် အသက်မပြည့်သေးသော မသန်စွမ်းမိန်းကလေးငယ်အား (ဦး –) အသက် ( ၆၃ ) နှစ်မှ အမှန်တကယ် မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ပေါ်ပေါက်၍ လပွတ္တာခရိုင်တရားရုံးမှ မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သူ( ဦး–) ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးဖြစ်ပါသည် ..
မုဒိမ်းမှုဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ၏ဘက်မှ မသန်စွမ်းမိန်းကလေးငယ်၏မုဒိမ်းမှုကို တရားလိုပြုလုပ်ကာ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သည့်အဖွားနှင့် ဦးလေးနှစ်ယောက်အား ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းခံသည်ဟုစွပ်စွဲပြီး အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ..
ယခုလို အမှုအား မှန်ကန်မျှတစွာ အမိန့်ချမှတ်သည်ကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် မူလစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် မြို့နယ်တရားသူကြီးနှင့် ယခုတာဝန်ယူအမိန့်ချမှတ်သည့် လပွတ္တာမြို့နယ်တရားသူကြီးတို့၏ ဘက်မလိုက်ပဲ မှန်ကန်စွာ တရားစီရင်ချက်အား လေးစားစွာ ကြိုဆိုလိုက်ပါသည် …
cradit Ghar Moon